China Cordless Impact Wrench Kugadzira uye Fekitori | Feihu
Feihu isina waya inokanganisa wrench chishandiso chemagetsi chinoshandiswa kusunungura kana kuomesa nzungu dzemabhandi, mabhaudhi mahombe, uye zvakasungirirwa nechando kana ngura. Inopa yakanyanya kutenderera torque iyo mutyairi wenguva dzose asingakwanise kupa. Inogona kushandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji, sekugadzirisa mota, inorema michina yekugadzirisa, gungano rezvigadzirwa, makuru ekuvaka mapurojekiti, uye chero imwe chiitiko panodiwa chakakura torque.
Feihu isina waya inokanganisa wrench inoshanda neyemukati sando yekushandisa iyo inoendesa kinetic simba kune inobuda mugodhi. Izvi zvinotevera iwo mamiriro acho:
Simba Chitubu: lithiamu bhatiri
Bhatiri Kugona: 2000mAh
Kutengesa Nguva: 2 maawa
Kurumidza: 0-2000 RPM
Max Torque: 320 Nm / 2830 mu-lbs
Kukura kweChuck: 14-28 mm
Packaging: bhokisi repurasitiki
1.Compact uye Inesimba: Yakashongedzerwa nemotokari ine simba, iyi 21V inokanganisa wrench inopa max torque 320 Nm uye max kumhanya 2000 RPM, inokutendera kuti usimbise kana kusunungura nzungu dzakasiyana siyana nemabhaudhi nyore.
2.Iyo isingachinjiki inomhanyisa Speed: Iine musiyano wekumhanyisa mhanyisa, iwe unogona nyore kudzora kumhanya kwewrench yako. Iyo yekuwedzera iwe yaunosundira iyo inokonzeresa, iyo inowedzera kumhanya kweiyo yekukanganisa wrench. Kamwe kuburitsa iyo inokonzeresa, chishandiso chinomira ipapo, chinoita kuti ive yakachengeteka panguva yekushandisa.
3.Power Chiratidziro uye mwenje we LED: Rechargeable 21V 2000mAh Li-ion bhatiri inobvumira chishandiso kushanda kwenguva yakareba. Chinongedzo chemagetsi chinoratidza simba rakawanda riri kushandiswa uye chinokuyeuchidza kubhadharisa munguva. Nechiedza che LED, unogona kushanda murima uye uone nzvimbo yebasa zvakajeka.
4.Heavy Duty uye Ergonomic Dhizaini: Iine mhando yepamusoro yezvinhu zvealloy simbi musoro, inatsiridza zvakanyanya hupenyu hwebasa reichi chishandiso. Rubha pamusoro-chakuvhuvhu mubato ne ergonomic dhizaini inopa yakanyanya kunyaradzwa uye kushoma kudedera.
Feihu isina waya inokanganisa wrench, sarudzo yakanaka kwauri, ita kuti basa rako rive nyore uye nyore.
Pashure: Lithium Mvura Pfuti
Zvadaro: Cordless Scissor
Cordless Wrenches Yakakwira Impact
Impact Wrench isina waya
Maindasitiri Cordless Impact Wrench